Akorandriaka miloko kofehy "manga" - Moi Mili
Home > Ondana miloko manga misy "manga"
Ondana miloko manga misy "manga"
Ny ondana vita amin'ny Moimili tany am-boalohany dia soso-kevitray amin'ny fanamboarana ny efitrano an'ny ankizy. Izy ireo dia mety ho fanampin'ny tranolainay na trano fandriana na seza amin'ny seza. Mampirisika anao izahay hamorona andiana ondana maromaro.
Lamba: 100% Cana misy fanamarinana OEKO-TEX®.
Fitaovana: landihazo, voajanahary, landy voajanahary, ondana, saron-doko, akanjo ondana